Hoggaamiyihii hore ee Ivory Coast oo xukun lagu ridayo Arbacada | Star FM
Home Caalamka Hoggaamiyihii hore ee Ivory Coast oo xukun lagu ridayo Arbacada
Hoggaamiyihii hore ee Ivory Coast oo xukun lagu ridayo Arbacada
Maxkamadda Caalamiga ah ee Dambiyada dagaalka ee ICC ayaa Arbacada go’aan ka gaari doonto kiiska ka dhanka ah madaxweynihii hore ee dalka Ivory Coast Laurent Gbagbo.
Gbagbo oo ah 75 sano jir iyo hoggaamiyihii dhallinyarada ee hore ee Charles Ble Goude ayaa laga tirtiray dambiyadii loo haystay sannadkii 2019-kii kuwaas oo la xiriira rabshadihii doorasho dhacday toban sano ka hor.
Dacwad oogayaasha ayaa ka hor imaaday tallabada kiiska looga bari yeelay Mr. Gbagbo waxayna doonayaan in dib loo maxkamadeeyo.
In ka badan 3,000 oo qof ayaa la dilay ka dib markii u masu’ulkani dood galiyay natiijadii doorashadii 2010-kii.
Gbagbo ayaa diiday inuu xilka ku wareejiyo madaxweeynaha haatan talada haya ee Alassane Ouattara, balse waxaa taasi soo farageliyay ciidamada Faransiiska.
Sannadkii 2011-kii ayaa kiiskiisa loo gudbiyay maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada ee magaalada Hague.
Previous articleDHAGEYSO:Maamulka mid ka mid ah shirkadaha basaska ee Wajeer oo ka hadlay saameynta xayiraadda dhawaan la saaray
Next articleIndia oo hal maalin laga xaqiijiyay in ka badan 40,000 oo ah xaaladaha cusub ee corona